Bit By Bit - Fametraham-panontaniana - 3.5 New fomba fametrahana fanontaniana
Ny fanadihadiana nentim-paharazana dia mihidy, manasitrana ary nesorina teo amin'ny fiainana. Ankehitriny dia afaka mametraka fanontaniana izay misokatra kokoa, mahafinaritra kokoa ary tafiditra bebe kokoa amin'ny fiainana.
Ny fepetra diso fanadihadiana dia mandrisika ny mpikaroka hieritreritra momba ny fikarohana amin'ny ankapobeny ho toy ny dingana roa fizarana: mametraka ny mpanadihady ary mametraka fanontaniana. Ao amin'ny fizarana faha-3.4, nodinihako ny fomba fanovàn'ny vanim-potoana nomerika ny fomba fandraisantsika ny olona voavaly, ary izao aho dia hiresaka momba ny fomba ahafahan'ny mpikaroka mametraka fanontaniana amin'ny fomba vaovao. Ireo fomba fanao vaovao ireo dia azo ampiasaina miaraka amin'ny santionany mety ho santionany na ohatrinona ny santionany.
Ny fomba fanadihadiana dia ny tontolo iainana izay anontaniany ny fanontaniana, ary mety hisy fiantraikany lehibe eo amin'ny fepetra (Couper 2011) . Tamin'ny vanim-potoana voalohany tamin'ny fikarohana natao, ny endrika mahazatra indrindra dia nifanatrika, fa tamin'ny vanim-potoana faharoa, dia telefaonina. Ny mpikaroka sasany dia mihevitra ny fikarohana fahatelo amin'ny fanadihadiana ho fanatsarana ny fomba fanadihadiana mba hampidirana ordinatera sy finday. Na izany aza, ny vanim-potoana nomerika dia mihoatra ny fanovàna ny fantsom-bokatra izay mametraha fanontaniana sy valiny. Fa kosa, ny fifindrana avy amin'ny analogie mankany amin'ny digital dia manome-ary mety hitaky - ireo mpikaroka hanova ny fomba fametrahana fanontaniana.
Ny fandinihan'i Michael Schober sy ny mpiara-miasa (2015) maneho ny tombontsoa amin'ny fanitsiana ny fomba nentim-paharazana mba hifanaraka kokoa amin'ny rafitra fifandraisana amin'ny alàlan'ny dizitaly. Anatin'ity fandalinana ity dia nampitaha ireo fomba fijery hafa i Askober sy ireo mpiara-miasa mba hametraka fanontaniana amin'ny olona amin'ny alalan'ny finday. Nampitahainy tamin'ny fanangonana ny angon-drakitra tamin'ny alalan'ny resadres-peo, izay mety ho fandikan-teny voa-janahary tamin'ny fomba fohy faharoa, mba hanangonana angona avy amin'ny alalàn'ny mikrosporveys maro nalefa tamin'ny alàlan'ny hafatra an-telefaona, fomba iray tsy misy fisainana mazava. Hitan'izy ireo fa ny hafatra entin'ny microsurveys nalefa tamin'ny hafatra an-tsoratra dia nitarika tamim-pahamendrehana bebe kokoa noho ny fanadihadiana feo. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fampidirana tsotra izao ny fomba fitrandrahana taloha ao anatin'ity sehatra vaovao ity dia tsy mitondra mankany amin'ireo tahiry ambony indrindra. Raha ny tokony ho izy, amin'ny fisainana mazava momba ny fahaiza-manao sy ny fenitra ara-tsosialy amin'ny finday, dia afaka namorona fomba tsara kokoa hametrahana fanontaniana izay mitarika ho amin'ny valim-panontaniana ambony kokoa i Schober sy ny mpiara-miasa.
Maro ny fomba ahafahan'ny mpikaroka manasongadina ny fomba fanadihadiana, fa heveriko fa ny endrika fanamarinana faran'izay manan-danja indrindra amin'ny fanadihadiana nomerika amin'ny alàlan'ny dizitaly dia ny fametrahana solosaina amin'ny ordinatera , fa tsy ny mpanadihady (toy ny amin'ny telefona sy ny fanadihadiana mivantana) . Ny fanesorana ireo mpanadina olona avy ao amin'ny fizotry ny fanangonana angona dia manome tombony lehibe ary mampiditra ny tsy fahampian-tsakafo sasany. Raha ny tombotsoa azo, ny fanesorana ireo mpanadina olona dia mety hampihena ny fitiavan-tsain'ny fiarahamonina , ny fironana ho an'ny mpanadihady manandrana maneho ny tenany amin'ny fomba tsara indrindra, ohatra, ny fitondran-tena mampihetsi-po (ohatra, ny fampiasana zava-mahadomelina tsy ara-dalàna) fihetsika (ohatra, fifidianana) (Kreuter, Presser, and Tourangeau 2008) . Ny fakana ireo mpanadihady olombelona dia mety hanafoana ny voka -pifanakalozan-kevitra amin'ny interquers, ny fironana amin'ny valim-panontaniana izay mety ho voataona amin'ny fomba tsotsotra amin'ny toetra mampiavaka ny mpitsidika olombelona (West and Blom 2016) . Ankoatra ny fanatsarana ny fahamendrehana ho an'ny karazana fanontaniana sasany, ny fanesorana ireo mpanadinadin'olona koa dia mampihena be dia be ny fandaniam-potoana - ny iray amin'ireo fandaniana lehibe indrindra amin'ny fikarohana momba ny fikarohana - ary ny fampitomboana ny fahafaha-manao, satria afaka mandray anjara isaky ny tiany ny olona voatanisa, fa tsy rehefa misy mpanadina iray . Na izany aza, ny fanesorana ny mpanadinadin'olona dia miteraka fanamby sasantsasany. Amin'ny ankapobeny, ireo mpampiofana dia afaka mampivelatra ny fifandraisana amin'ireo mpanadihady izay afaka mampitombo ny taham-pidirana, mamelabelatra fanontaniana mampisafotofoto, ary mitazona ny fandraisana andraikitra ataon'ny mpanohana azy ireo mandritra ny fotoana lava indrindra (Questionnaires) (Garbarski, Schaeffer, and Dykema 2016) . Noho izany, ny famadihana avy amin'ny fomba fanadinadinana iray natao tamin'ny fanadinadinana amin'ny solosaina iray amin'ny solosaina dia mamorona fotoana sy fanamby.
Avy eo, hamaritra fomba roa aho hanehoana ny fomba fikarakaran'ireo mpikaroka ny fitaovana ampiasaina amin'ny vanim-potoana nomerika hametrahana fanontaniana amin'ny fomba hafa: fametrahana ny fanjakana anatiny amin'ny fotoana sy toerana mety kokoa amin'ny alalan'ny fanombanana ny tontolo iainana (fizarana 3.5.1) sy ny fampifandraisana ireo tanjaka ny fanontaniana fametrahana fanadihadiana misokatra sy mihidy amin'ny alalan'ny fanadihadiana wiki (fizarana 3.5.2). Na izany aza, ny hetsika mankany amin'ny fangatahana solosaina amin'ny ordinatera dia midika ihany koa fa mila mamolavola ny fomba fangatahana izay mahafinaritra kokoa ho an'ny mpandray anjara isika, ary indraindray ny atao hoe fanamarinana (fizarana 3.5.3).